नारी स्वरूपकी परमेश्वर, माता परमेश्वर
सेप्टेम्बर 27, 2017 जुन 17, 2020 rio550770LeaveaComment on नारी स्वरूपकी परमेश्वर, माता परमेश्वर
आमाले जीवन दिने भएकोले आमा भएमा मात्र शिशुले जीवन पाउन सक्छ ।
ख्रीष्टियान धर्मको सुरू देखि नै, हामीहरू पिता परमेश्वरसित परिचित छौं । हामी आफैलाई परमेश्वरको सन्तान पनि भन्दछौं । तर किन बाइबलमा हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हौं भनेर भनिएको होला ? र किन येशू ख्रीष्टले हामीलाई पिता परमेश्वरको नाउँमा प्रार्थना गर्न सिकाउनुभएको होला ?
बुबाको अस्तित्व भएको कुराले स्वाभावत छोराछोरी छन् भन्ने कुरा सङ्केत गर्दछ । आमाले जीवन दिने भएकोले आमा भएमा मात्र छोराछोरीले जीवन पाउँछन् ।
परमेश्वरको सन्तान भएका हामीलाई ख्रीष्टले स्वर्गमा रहनुहुने पिताको नाउँमा प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको चाहिँ, हाम्री माता परमेश्वर पनि हुनुभएकोले गर्दा हो ।
बाइबलमा उत्पत्ति देखि प्रकाशसम्म माता परमेश्वरको गवाही दिएको छ ।
माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरले तिनीहरूलाई थाहा गराउनुभएकोले तिनीहरूलाई परमेश्वरसम्बन्धी सत्यता थाहा छ । संसारको सृष्टिदेखि नै, मानिसहरूले आकाश र पृथ्वी देखेका छन् । उहाँको अदृश्य गुण, अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ । यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन ।
परमेश्वरले सम्पूर्ण जीवित प्राणी सृष्टि गर्नुभयो । फरक आवास र विशेषताहरू भएका फरक-फरक प्रजाति भएतापनि, तिनीहरूमा एउटा कुराको सामान्यता छ । तिनीहरू सबैले आमाद्वारा जीवन पाउँछन् । परमेश्वरले त्यसरी नै हुने गराउनुभएको हो ।
हब्बाले माता परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ ।
६ दिनको सृष्टिकार्यमा, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको इच्छाको विषयमा सिकाउन एउटा विशिष्ट उदाहरण दिनुभएको छ ।
अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं … यसैकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो । परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो । नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो ।
परमेश्वरले मानव-जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा, “हामी” र “बनाऔं” भन्ने बहुवचन प्रयोग गर्नुभयो । यसको अर्थ सृष्टिको कार्यमा एक जनाभन्दा बढी परमेश्वर संलग्न हुनुहुन्छ ।
परमेश्वरको बहुवचन स्वरूपमा सृष्टि भएका पहिलो मानिस नै आदम र हव्वा हुन् ।
आदम नर स्वरूपका परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका हुन् । हव्वाचाहिँ नारी स्वरूपकी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएकी हुन् ।
आदम र हव्वा परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएकाले, बाइबलअनुसार उनीहरूले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछन् ।
ती आदमचाहिँ आउनुहुनेको ख्रीष्टको प्रतिरूप थिए ।
आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, ’cause सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन् ।
उत्पत्तिको पुस्तकमा, परमेश्वरले आदमलाई सबैकुरा गर्न सक्ने शक्ति दिनुभएको कुरा देख्न सक्छौं । तर आदमले गर्न नसक्ने एउटै मात्र कार्य नै सन्तान जन्माउने कार्य हो । त्यसैले तिनले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, जसको अर्थ “जीवन” हो, र आमाद्वारा मात्र जीवन पाउने भएकाले, तिनलाई “जीवितहरूकी आमा” भने । अगमवाणीअनुसार, परमेश्वरले पिता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुभए तापनि, आत्मिक जीवन अर्थात् अनन्त जीवन पाउनको निम्ति माता परमेश्वरको आवश्यकताको विषयमा जानकारी दिनुभएको छ ।
येशूज्यूले माता परमेश्वरको विषयमा अगमवाणी गर्नुभएको
२,००० वर्षअघि, येशूज्यूले इस्राएलीहरूको सामु असंख्य आश्चर्यको कामहरू गर्नुभयो । उहाँले विवाह-भोजमा पानीलाई दाखमद्यमा परिवर्तन गर्नुभयो, अन्धालाई दृष्टि दिनुभयो, साथै लाजरसलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो । खृष्टिको निम्ति कुनै कुरा गाह्रो थिएन । तापनि, किन उहाँले अनन्त जीवनचाहिँ अन्त्यको दिनमा दिनेछु भनेर ढिला गर्नुभएको होला ?
“र मलाई पठाउनुहुनेको इच्छा यो हो, कि उहाँले मलाई दिनुभएकाहरूमध्ये कसैलाई पनि म नगुमाऊँ, तर तिनीहरूलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पारूँ ।”
“’cause मेरा पिताको इच्छा यो हो, कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्, र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु ।”
“मलाई पठाउनुहुने पिताले खिँच्नुभएन भने कोही मकहाँ आउन सक्दैन, र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु ।”
“मेरो देह खाने र रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु ।”
अन्त्यको दिनमा” अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएर, येशूज्यूले आत्मिक जीवन दिनुहुने माता परमेश्वरचाहिँ हाम्रो समयमा प्रकट हुनुहुने कुरा जानकारी दिन खोज्नुभएको हो ।
हामी रमाऔं र अत्यन्त खुशी होऔं, र उहाँलाई महिमा दिऔं ! किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ, र उहाँकी दुलही स्वयम् तयार भएकी छिन् ।
बाइबलमा, थुमाले ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्दछ(यूहन्ना १:२९) । वर्तमान समयको विषयमा लेखिएको प्रकाशको पुस्तकमा, ख्रीष्टकी पत्नीले वर्तमान समयको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुभएको कुरा लेखिएको छ । उही प्रकाशको पुस्तकमा दुलही चाहिँ स्वर्गीय यरूशलेम हुनुहुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तब ती सात अन्तिम विपत्तिले भरिएका सात कचौरा हुने सात स्वर्गदूतहरू मध्ये एक जना आएर मलाई यसो भने, “आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु ।” तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे, र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरूशलेम मलाई देखाए ।
गलातीको पुस्तकमा स्वर्गीय यरूशलेम र हामी बीचको सम्बन्धको विषयमा वर्णन गरिएको छ ।
ख्रीष्टकी पत्नी हाम्री आमा हुन् । परमेश्वरले हव्वालाई सृष्टिको कार्यमा अन्तिम दिनमा सृजनु भएजस्तै, स्वर्गीय माता पनि हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति यस अन्तिम समयमा देखा पर्नुहुन्छ ।
माता परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनन्त जीवन
माता परमेश्वरलाई चिनेर विश्वास गरेमा मात्र, परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनन्त जीवन दिनुहुनेछ ।
अब हे भाइ हो, इसहाकजस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं ।
उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो ̶ अनन्त जीवन ।
१ यूहन्ना २:२५
सृष्टिको उत्पत्ति देखि नै, परमेश्वरले जीवन चाहिँ बुबा र आमा दुवैबाट दिने गराउनुभयो । अहिले हामीहरू, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर दुवैले अनन्त जीवन दिन बोलाउनुभएकोले परमेश्वरको इच्छा पूरा भएको देख्न सक्छौं ।
Previous Post Previous post: एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर
Next Post Next post: स्वर्गको परिवारको प्रणाली